निर्धन उत्थान लघुवित्तको लाभासमा आयो कमी , वित्तीय अवस्था कस्तो ? - Lagani News
Home Analysis Dividend Share निर्धन उत्थान लघुवित्तको लाभासमा आयो कमी , वित्तीय अवस्था कस्तो ?
निर्धन उत्थान लघुवित्तको लाभासमा आयो कमी , वित्तीय अवस्था कस्तो ?
Published: Saturday, September 29, 2018 2018-09-29T07:41:00-07:00
Santosh Raj Bajgain September 29, 2018 Analysis, Dividend, Share,
मुख्य गतिविधि : निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष ७४/७५ को मुनाफाबाट लाभास प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत बोनस शेयर र २२ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांस प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभास नेपाल रास्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि र कम्पनीको आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ।
➤ लघुवित्तको चौथोे त्रैमाससम्म आइपुग्दा खुद ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट संगै लघुवित्तको खुद मुनाफामा पनि ४ प्रतिशतले कमी आएको छ । लघुवित्तले यो त्रैमासमा ५५ करोड ९२ लाख खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५८ करोड ३४ लाख खुद मुनाफा कमाएको थियो ।
➤ लघुवित्तको जगेडा कोषमा २ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । कोषमा अहिले १ अर्ब २५ करोड रुपैया रहेको छ ।
➤ खुद मुनाफामा आएको गिरावटसंगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न बैंकलाई कठिन परेको देखिन्छ । यो त्रैमासमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ९७ रुँपैया २३ पैसा बाट घटेर ५५ रुपैया ९२ पैसा कायम भएको छ ।
➤लघुवित्तको सापटी रकम ३ प्रतिशतले कम भएर ६ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने कर्जा सापट २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीले ८ अर्ब ५७ करोड निक्षेप सन्कलन गरेको छ । निक्षेप सन्कलन ३८ प्रतिशतले वृद्धि हुन सफल भयो ।
➤ लघुवित्तको मुख्य आम्दानीको कुरा गर्दा खुद ब्याज आम्दानी ८ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ३० करोड पुगेको छ छ । त्यस्तै लघुवित्तको संचालन नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेर ८० करोड ९६ लाख पुगेको छ । आम्दानीमा ८ करोड ५० लाख प्रोभिजन घट्न पुग्यो भने जोखिम कोषबाट रकम फिर्ताे भएको छैन ।
➤ लघुवित्तले निष्क्रिय कर्जामा केही वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा बैंकको निष्क्रियकर्जा ० दशमलव ३१ प्रतिशतबाट ० दशमलव ९२ प्रतिशतमा आएको छ ।
➤ लघुवित्तको कोषको लागत भने घटेको छ । बैंकको कोषको लागत ९ दशमलव ०७ प्रतिशत बाट घटेर ८ दशमलव ३५ पुगेको छ ।
➤ लघुवित्तले प्रकाशन गरेकोे वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय २५ रुपैयाँ १० पैसा, तरलता अनुपात १३ दशमलव ९९ प्रतिशत, रहेको छ ।
बिहिबारको बजार मूल्यलाई प्रति शेयर आम्दानी संग दाजेर हेर्दा मूल्य आम्दानी अनुपात १८ गुणा छ।
कम्पनीको जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै रकम संचित भएकाले कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ (किताबी मूल्य ) २२५ रुपैया छ। त्यस्तै मूल्य र किताबी मूल्यको अनुपात ४ गुणा छ।
व्याज खर्चमा आएको वृद्धिले गर्दा लघुवित्तको प्रमुख आम्दानीको श्रोत खुद व्याज आम्दानीमा गिरावाटले गर्दा कम्पनीको खुद नाफामा कमी आयो जसले गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी घट्न पुग्यो । चुक्त्ता पूँजी भन्दा जगेडा कोष धेरै हुनुपनि कम्पनीको एउटा बलियो पक्ष रहेको छ । त्यस्तै बैंकको प्रोभिजन रकममापनि आएको वृद्धिले नाफामा असर देखिएको हो ।
Tags # Analysis # Dividend # Share
By Santosh Raj Bajgain - September 29, 2018
Tags Analysis, Dividend, Share